Ra’iisal Wasaare Kheyre oo dhagax dhigay dhismaha cusub ee Hay’adda Socdaalka (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Ra’iisal Wasaare Kheyre oo dhagax dhigay dhismaha cusub ee Hay’adda Socdaalka (Daawo Sawirada)
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maanta dhagax dhigay xarun cusub oo loogu tala galay in ay ku shaqeyso Laanta Socdaalka iyo Jinsiyadaha Dowladda Somaliya.
Xaruntan cusub oo ku taallo Degmada Waaberi ee Gobolka Banaadir, ayaa dhagax dhigeeda waxaa ku sugnaa Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, Wasiirka Amniga iyo Agaasimaha Hay’adda Socdaalka, iyadoo Ra’iisal Wasaare Kheyre uu dhagax dhigay.
Ra’iisal Wasaaraha Somaliya ayaa sheegay dhismaha xarunta cusub ee Hay’adda Socdaalka inay qayb ka tahay horumarada kala duwan ee dalka uu ku tilaabsaday.
Agaasimaha Hay’adda Socdaalka Iyo jinsiyadaha Somaliya Maxamed Aadan Jimcaale “Koofi” ayaa sheegay in marka la dhameeyo dhismahan hadda kadib Hay’adda ay ku shaqeyn doonto xaruntaasi.
Dhulkaan laga dhisi doono dhismaha cusub ee Hay’adda Socdaalka ayaa waxaa bixiyay Maamulka Gobolka Banaadir, wuxuuna ku yaalla agagaarka Garoonka, gaar ahaan dhismihii la oran jiray Xaafaddaha kalluunka ee dadkii barakacayaasha ahaa laga saaray.
Hay’adda Socdaalka Iyo jinsiyadaha ayaa hadda ku shaqeysa xarun ku taallo wadada shaqaalaha, halkaasi oo amnigeeda si weyn loo adkeeyay, waxaana qorshaha uu yahay in goobtaasi laga raro, maadaama wado dhan oo muhiim ah u xiran tahay Hay’adda.